Ny ho avin'ny LATAM Airlines hoy ny CEO Peter Cerda
Home » Interviews » Ny ho avin'ny LATAM Airlines hoy ny CEO Peter Cerda
CEO an'ny LATAM Airlines
Ny CEO an'ny LATAM Airlines, Roberto Alvo, dia miresaka momba ny fandraisana ny toeran'ny CEO amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka voalohany any Amerika Latina, izay voadona mafy avy tamin'ny COVID-19.
LATAM dia lasa iray amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka 10 lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ary mazava fa marika iraisam-pirenena tena mahomby, ary marika iraisam-pirenena mihitsy aza ao amin'ny indostria.
Maka ny toeran'ny tale jeneralin'ny orinasa ianao mandritra ny fotoana manomboka ny areti-mifindra, COVID, manerana an'i Azia ka hatrany Eropa.
Mandray ny lohanao LATAM ianao, ary roa volana latsaka aorian'ny, amin'ny Mey, dia manao fizarana ho an'ny toko faha-11 ianao.
Tamin'ny resadresaka mivantana iray, Peter Cerda an'ny CAPA - Ivotoerana fiaramanidina, miresaka amin'i Robert Alvo, CEO farany an'ny LATAM Airlines.
Faly be aho manadinadina ny iray amin'ireo mpitarika ny sidina voalohany any Amerika Latina, Roberto Alvo, izay tompon'andraikitra ambony amin'ny LATAM. Buenos dias Roberto, manao ahoana ianao?
Hola Peter, hi Peter, manao ahoana ianao? Fahafinaretana mahita anao ary fahafinaretana ho eto ho an'izay rehetra hiditra. Mamerina ny fisaorana anao.
Ka avelao aho hanomboka eo fotsiny. Manana daty roa tena manan-danja eto aho. Septambra 2019, nolazaina ianao fa CEO vaovao an'ny [Enrique Cueto 00:01:03], angano iray, olona iray nanangana ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka voalohany ao amin'ny faritra. Ianao no mpandova handimby ilay zotram-piaramanidina lehibe sy lehibe. Volana vitsivitsy monja aorian'io dia ny martsa no andro lehibe ho anao. Maka ny toeran'ny tale jeneralin'ny orinasa ianao mandritra ny fotoana manomboka ny areti-mandringana, COVID, manerana an'i Azia ka hatrany Eropa. Maka ny lohanao LATAM ianao, ary roa volana latsaka aorian'ny, amin'ny Mey, dia ianao fametrahana ny toko 11. Tsy volan-tantely tena manintona izay nanananao. Ary nanomboka tamin'izay, vao herintaona monja ny fanamby goavana, tsy eto an-tany ihany, fa amin'ny sehatra isam-paritra. Amerika Latina sy Karaiba no voa manokana. Nikatona ny ankamaroan'ny sisin-taninay. Nanao ahoana taminao ity herintaona ity? Ary manenina ve ianao amin'ny datin'ny volana septambra izay nanambarana fa ho lasa CEO ianao? Mba efa nieritreritra ve ianao hoe ho eo amin'ny toerana misy anao ankehitriny?
Tsia, tiako holazaina, voalohany, ho ahy, voninahitra lehibe ny manana fotoana hahombiazana mety ho ilay CEO malaza indrindra nananan'ny indostria tany Amerika Latina. Enrique dia nandany 25 taona tamin'ny fiainany tamin'ny fananganana LATAM avy amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka kely ka hatramin'izao. LATAM dia lasa iray amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka 10 lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ary mazava fa marika iraisam-pirenena tena mahomby, eny fa na dia marika manerantany momba izany aza. Ka ho ahy dia loharanom-pireharehana goavana ny nandray ny lohany, araka ny efa noresahinay azy, ary manandrana manatsara ny LATAM. Ary hameno ireo kiraro tena lehibe ireo, izay mazàna andraikitra lehibe.
Eny, ary araka ny voalazanao, iza no hahafantatra fa latsaky ny 60 andro taorian'ny nandraisako ny fahefana dia tsy maintsy nitondra ny orinasa ho amin'ny toko faha-11 aho, ny tiako holazaina dia hoe tsy dia tsara izany ao amin'ny CV-nao rehefa miteny aho hoe: "CEO, latsaky ny 60 andro no naka ny orinasa tao amin'ny toko faha-11. ” Tsy dia tsara loatra izany. Fa ity dia taona tsy nampoizina, marina. Ie. Ary tsy nino mihitsy aho fa ho eo amin'ny toerana misy antsika ankehitriny isika. Heveriko fa ho an'ny mpitarika tsirairay amin'ny indostrian'izy ireo, isika dia mitantana ny fotoana sarotra indrindra mety hananan'ny orinasa ivelan'ny fotoanan'ny ady. Saingy tamin'izany fotoana izany dia traikefa tsy nampoizina. Ary faly be aho mahita ny fomba nahafahan'ity vondrona orinasa nitety ireo toe-javatra tena sarotra ireo. Tena mirehareha amin'ireo mpiasa 29,000 XNUMX miasa amin'ny LATAM. Ary tsy ho eto isika raha tsy ho an'ny tsirairay amin'izy ireo. Ary traikefa nahafinaritra nianarana izany ho antsika rehetra.
Ka tena faly aho eto, na dia somary hafahafa sy mahatsikaiky ihany aza izany. Io angamba no iray amin'ireo fotoana lehibe indrindra hitondrana orinasa amin'ity toe-javatra tena hafahafa ity.
Roberto, hikasika isika ary hiditra amin'ny LATAM afaka minitra vitsy. Andao hijanona kely kokoa amin'ny krizy isika. Ianao dia zotram-piaramanidina efa nisy talohan'ny COVID, tamin'ny faran'ny volana desambra 2019, fiaramanidina 330 mahery, dia nanidina tany amin'ny firenena 30 mahery, toerana 145 ianao. Miaraka amin'ny COVID, miaraka amin'ny fikatonan'ny sisin-taninay, dia nifandray tamin'ny tanàna 1700 izahay tamin'ny ambaratongam-paritra nanerana ny 640 tamin'ny volana aprily, izay miaraka amin'ny fihodinan'ny enta-mavesatra antsika, ankehitriny dia 1400 ny fifandraisana amin'ny tanàna. Hatraiza ny fandravana ny fameperana napetraka amin'ny indostria, amin'ny lafiny fikatonam-baravarana, ny fepetra ataon'ny governemanta, ahoana ny fahasarotanao ho anao amin'ny maha-kaompaniam-pitaterana an'habakabaka anao mahavita mitantana amin'izao krizy izao?
[Tsy reko 00:04:49] dia nanaitra i Peter. Tamin'ny 11 martsa dia nanidina sidina 1,650 izahay. Tamin'ny 29 martsa lasa teo, nidina hatrany amin'ny sidina 50 isan'andro isika. Noho izany, 96% ny fahaiza-manao kely ao anatin'ny 20 andro. Heveriko fa niaritra izany isika rehetra. Ary nandany efa-bolana saika tsy niasa na inona na inona izahay, latsaky ny 10% ny fahafaha-manaonay. Ary amin'ny faritra manokana, somary miadana ny fanarenana raha oharina amin'ireo faritra hafa, miaraka amina fameperana maro, araka ny voalazanao, avy amin'ny governemanta samihafa. Angamba ny zavatra sarotra indrindra dia ny fanovana ny fetra sy ny tsy fahaizan'ny mpanjifa mikasa mihitsy, miaraka amin'ireo fepetra rehetra ireo. Heveriko fa samy mankasitraka ny halaviran'ny fiaraha-monina isika, zava-dehibe sy ilaina izany. Saingy indrisy, toe-javatra iray izay hitantsika teto, ary azo antoka fa any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao, dia tena nisedra fanamby lehibe ho an'ireo zotram-piaramanidina.
Mieritreritra aho fa ny fanarenana, ary angamba hiresaka kely momba ny ho avy isika, dia hotanterahin'ireto lalàna ireto. Ary mila mieritreritra ny fomba anaovantsika ny indostrian'ny seranam-piaramanidina hiverina haingana araka izay tratra isika. Ary tena handray andraikitra lehibe ny governemanta eto.
Andao hiresaka kely momba ny governemanta eto. Manana tontolo sarotra be izahay. Ao amin'ny faritra misy anay dia iharan'ny toe-javatra ara-tsosialy, ara-toekarena, ara-politika foana isika isan-taona. Moa ve nahavita nanampy betsaka ny indostria ireo governemanta ao amin'ny faritra misy antsika amin'izao krizy izao?
Fanontaniana sarotra ny mamaly azy. Araka ny efa fantatrareo, izahay dia tsy nahazo fanampiana avy amin'ny governemanta mba ho velona sy ho voavonjy, toy ny orinasa maro any amin'ny hemisphere avaratra. Marina fa na dia mahantra aza ny governemantantsika. Firenena mahantra ireo [tsy henoina 00:06:37]. ary tiako tanteraka fa miatrika fanamby sy filàna maro be ny governemanta. Ary ity dia faritra misy olona marobe mahantra. Ary azoko tsara ny filàna fanampiana azy ireo.
Rehefa avy nilaza an'izany aho dia mino fa mbola afaka manao zavatra betsaka kokoa ny governemanta. Ary ny fomba fitetezan'ny governemanta amin'ny volana ho avy satria manantena ny hirongatra miaraka amin'ny vaksininy ny krizy, dia ho lakilen'ny fahombiazan'ny kaompaniam-pitaterana misidina ao amin'ny faritra na kaompaniam-pitondrana maniry hisidina mankany amin'ny faritra. Tiako ny mahita ireo governemantantsika any amin'ny faritra miasa amin'ny fomba mirindra kokoa. Heveriko fa ilaintsika izany. Ity dia ampahany lehibe dia lehibe eto an-tany. Ary indrisy, tsy misy mahasolo ny sidina manidina raha te-hifindra ianao. Tsy ny làlambe no lehibe indrindra. Manana rafitra fiaran-dalamby kely sy kely ao amin'ny faritra izahay. Ka ny seranam-piaramanidina dia tena fanalahidy hahazoana antoka fa ny fifandraisana eo amin'ny faritra dia mijanona ary miverina, ary ny fampandrosoana ara-toekarena miaraka amin'izany dia azo antoka.
[tsy henoina 00:07:48], niresaka hevitra lehibe iray ianao, ny vaksininy, ary nahatonga anao hatoky tena. LATAM [tsy henoina 00:07:53] ny faritra misy anao, ny faritra, tsy ny isam-paritra ihany fa ny iraisam-pirenena koa. Ny LATAM dia hanana andraikitra lehibe amin'ny fitondrana ireo vaksiny ireo any Amerika Latina ary hitondra izany amin'ireo vondrom-piarahamonina samihafa. Inona no andraikitra nataonao tamin'ny governemanta? Nanao ahoana ny fiaraha-miasan'ny governemanta taminao? Satria ezaka tena lehibe io. Araka ny voalazanao, tsy manana fotodrafitrasa izahay ahafahanay mitondra ireo vaksiny amin'ny alàlan'ny fomba fitaterana hafa. Raha vantany vao tonga any amin'ny faritra dia tsy maintsy fiaramanidina izany. Ary ny LATAM dia handray andraikitra tena lehibe. Ahoana ny fandehan'io fandrindrana io?
Izahay dia nandroso ary nifandray tamin'ny governemanta rehetra ao amin'ny faritra ary nahita izay fomba ahafahanay manampy. Azoko lazaina aminao ihany koa, amin'izao fotoana izao, efa nitatitra vaksin efa ho 20 tapitrisa tany amin'ny faritra izahay, any Amerika atsimo. Izay angamba saika ny vaksininy rehetra izay efa nentina tany amin'ny faritra. Nanolo-tena izahay hanampy ireo vondrom-piarahamonina iasanay sy ireo firenena misy fiasanay amin'ny fizarana ireo vaksiny rehetra tadiavin'izy ireo maimaimpoana. Ary amin'ity vanim-potoana ity dia efa nizara vaksin mihoatra ny 9 tapitrisa isika eto an-toerana. Ary tonga tany amin'ny toerana lavitra indrindra any amin'ny faritra izahay, toa ny Patagonia any Chile, ny Nosy Galápagos any Ekoatera ary ny ala tropikaly Amazonian any Peroa sy Brezila. Noho izany, tena reharehanay fa izahay, heveriko fa mametraka sombin-tsiranoka amin'ity ezaka ity ary manome antoka fa afaka manampy ny fizotran'ny vaksiny haingana araka izay tratrantsika izahay. Noho izany, ny fanoloran-tenantsika amin'ireo governemanta izay iasanay dia ny manohy tsy vitan'ny vaksinin'ny fandefasana maimaimpoana, fa koa ny mpiasan'ny fitsaboana sy ny zavatra hafa rehetra ilaina mba hahazoana antoka fa manana loharanon-karena hiadiana amin'ny areti-mandringana ity governemanta ity.
Kitiho ny pejy manaraka raha hanohy hamaky
Ny Mpanjaka Andrianjaka dia maty
Mpijirika: Fisorohana ireo loza ateraky ny Wi-Fi ampahibemaso